I-Aries Taurus Cusp Indoda kunye nePisces yokuhambelana komfazi - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Aries Taurus Cusp Indoda kunye nePisces yokuhambelana komfazi
I-Aries Taurus Cusp Indoda kunye nePisces yokuhambelana komfazi
Lo ngumdlalo ogqibeleleyo wobudoda nobufazi. Ukulinganisela okuhle kunokulindeleka phakathi kwe-Aries / Taurus enothando, ethembekileyo kunye nothobekileyo, onovelwano, onobubele. NgeePisces, ii-Aries / iTaurus zinokuziva zikhuselekile kwaye zimvumela ukuba abone ubuthathaka bakhe ngaphandle koloyiko lomgwebo. Kodwa kufuneka balumke omnye nomnye.
Xa eyona ndoda yamadoda i-Zodiac idibana nabona bafazi, iintlantsi ziya kubhabha ngokuqinisekileyo. Yomelele, ivutha umlilo kodwa izinzile, indoda ezelwe kwi-Aries / Taurus Cusp iya kuba ngumdlalo ogqibeleleyo womfazi wasePisces, othambileyo, onemvakalelo kunye nolwelo. Olu lwalamano alunakuba lula, kwaye ukuba bekunyaniseka akukho buhlobo, kodwa ukuba aba babini basebenza kunye baya kufumana ulungelelwaniso olugqibeleleyo.
Abo bazalwe kwi-Aries / Taurus Cusp baya kuba namava omabini imiqondiso, enokuthi ilungelelanise ezinye zeempawu ezimbi ezinxulumene nayo yomibini imiqondiso, ngakumbi xa kufikwa kuthando.
Indoda eyi-Aries inokuzikhukhumeza, isokola ukwamkela nezona mpazamo zincinci, kunye nokudinwa yimfuno yokulawula ubudlelwane bayo, ukubanalo ngokupheleleyo iqabane lakhe kwezinye iimeko. Kodwa indoda yaseTaurus ayenzi nto ngothando, ifuna umfazi owomeleleyo oza kukhokela ubudlelwane, unenkani kodwa akaboni ubuthathaka bakhe.
I-Aries / Taurus Cusper iya kuvuleleka ngakumbi ekwamkeleni iimfuno zakhe kunye nobuthathaka, uya kuba nendlela elungeleleneyo yothando- engafuni ukulawula okanye ukulawulwa. Kodwa unokuba nenkani ngakumbi kunenkunzi yenkomo.
indlela yokuvula umntu wepisces
Izidingo zowesifazane wasePisces
Umfazi wasePisces uya kumvumela ukuba athathe ulawulo, olulungileyo ngokujonga umntu ozelwe yiAries / Taurus Cusper ozelwe njengenkokeli. Uya konwaba, enyanisweni, kwaye yonke into ayifunayo ngokubuyisela kukukhathalelwa ngokwenyani.
Yiba mnandi kule ntombazana - njengoko mhlawumbi sele uyazi ukuba uncumo lonke, uvelwano, kunye nobubele kwaye ufuna intwana yokubuya. Nokuba ukhona womelele ngokweemvakalelo , ngokwasemzimbeni, okanye ngokusisiseko ungomnye wabafana, kusenokwenzeka ukuba le ntombazana iyiswekile kunye nobufazi ngaphakathi kwaye nokuba akakho kangako, iAries / iTaurus Cusper eyindoda kungenzeka ukuba ikhuphe naliphi na ibhinqa lobufazi. Ke lumka, ngelixa yena evuyiswa ngakumbi kukuvumela ukuba ube yindoda yakhe enkulu, eyomeleleyo ingamoyisi okanye inyathele iimvakalelo okanye iminqweno yakhe - izinto zihlala ziphambili xa uthandana nePisces.
Uhlobo lwayo lokuyalela, uvelwano luya kuthi khuthaza iAries / iTaurus ukuba nekratshi okanye ukuzingca. Oku kuyinxalenye yendalo ye-Aries kodwa xa kubudlelwane nomfazi wePisces unokuchuma, ngokucacileyo ngeendlela ezimbi.
Kwaye ngelixa ebonakala ngathi ulungile, konke ukuncuma kunye novelwano, kodwa ngaphakathi uyawa, atshiswe ngumlilo we-Aries kwaye woyiswe yimvelo yenkani yeTaurus.
Ukunyaniseka kuthelekiswa nokubaleka
Xa ulwalamano kunye nePisces, kuya kufuneka uqwalasele iimfuno kunye neemvakalelo zakhe, nokuba akathethi, ukuba yonke into ibonakala ilungile, kufuneka umjonge. Kodwa kwakhona, kufuneka afunde ukuzimela kwaye enze iimfuno zakhe zaziwe. Kusenokwenzeka ukuba uya kudibana kakhulu neqabane lakhe, njengoko oku kuza ngokwendalo kuye, kwaye unokulindela ukuba iqabane lakhe likufumane ngokulula.
Intombazana yePisces mhlawumbi ifuna ukujiya ulusu lwayo, ngakumbi kubudlelwane nesibindi kunye ne-bries Aries / Taurus. Unokuba sesichengeni kwisindululo ngokunjalo, esenzela kakhulu umntu ocekeceke kubudlelwane nomntu onamandla kakhulu.
ukuchukumisa njani umfazi we-gemini
Ngabo bonke ububele bakhe kunokwenzeka ukuba atsale ingqalelo kakhulu . Kubalulekile ukuba ii-Aries / Taurus ukuba ziqonde, zingabi nomona oku kunokusongela ukudiliza ubudlelwane. I-Aries / Taurus, yenza konke okusemandleni akho ukuba uqonde kwaye umnike indawo.
Nika iiPisces indawo kwaye uya kuhlala ebuyela kuwe, mtyhale kwaye abaleke. Usengowakho, usakuthanda, kodwa kukubiza kwakhe ukunceda abanye.
I-Taurus yaziwa ngokugxila kwakhe ngokunyaniseka kwaye inyani, ngelixa iPisces ifumana inyani ibe yimvakalelo. Ukuxhomekeka kwakhe, ukubambezeleka, kunye nokungaqiniseki, ukuba ayifihli, indalo ngamanye amaxesha iya kwenza iAries / Taurus Cusper ifune ukumgungqa. Kuya kufuneka afunde umonde ngokukhawuleza.
Aba babini baya kuba nesondo esomeleleyo umtsalane ngenxa yeempawu zabo zobudoda kunye nobufazi, indalo njengeempawu zomhlaba kunye namanzi, kunye nothando loMlilo kunye nemvakalelo yaManzi.
Baya kuthandana ngokwenene kwaye ukuba banokufumana ulungelelwano ubudlelwane babo buya kutyatyamba kwaye bukhule.
Ngaba iScorpio Woman siyakhohlisa? Iimpawu zokuba angakhohlisa kuwe
Iimpawu zeZodiac zokuhambelana kobuhlobo
abantu abazalwe ngo februwari 9
i-femes kunye ne-virgo eyindoda
Ngaba amadoda e-aquarius aba nomona
umfazi we-taurus virgo indoda yohlukana
indlela yokulukuhla umfazi taurus ebhedini
taurus umhlaza womfazi umfazi umtshato
Ungayiphumelela njani i-leo woman heart back